Ngabe amathayi aseVittoria mahle? - Izibuyekezo
Main > Izibuyekezo > Ukubuyekezwa kwamathaya eVittoria - Incwadi ephelele
Ukubuyekezwa kwamathaya eVittoria - Incwadi ephelele
Ngabe amathayi aseVittoria mahle?
Ukunqobauthi benza izigidi eziyisikhombisaamathayiunyaka, isibalo esihlaba umxhwele! TheUkunqobaIgama lomkhiqizo liyafana nomjaho wobungcwetiamathayi, njengoba zakhiwe ngejubane nokuphathwa. Ngesikhathi esifanayo,Amathayi okunqobanazo zihlotshaniswa kakhulu nentengo ephezulu nokuqina okungabazekayo.07.30.2016
Isethi enhle yamathayi ebhayisikili lakho ibaluleke impela. Kepha empeleni zivame ukuthathwa kalula, okuyihlazo, ngoba kukhona ubuchwepheshe obuningi kusethi eyodwa yamathayi. Ngakho-ke uVittoria wangimemela efemini yabo lapha eThailand ukuze ngibone kahle ukuthi la mathayi enziwa kanjani, aqukethe i-graphene kanye nenhlanganisela yezinhlangothi ezine.
Lungela ubuchwepheshe obuthize besondo. (Umculo Ojabulisayo) - IVittoria wuphawu olwaziwa phakathi kwabangane bethu abathanda i-asphalt futhi inomlando ocebile osukela emuva ngonyaka we-1853. Manje akuyona imfihlo ukuthi benza amanye amathayi omgwaqo ahamba phambili emhlabeni.
Futhi ngenxa yalokho babebaningi abashayeli abashesha ngokumangazayo nabashayeli bezimoto zomjaho kanye namaqembu futhi. Kwesinye isikhathi, kwesinye isikhathi noma ngabe ucelwa ukuthi asebenzise eminye imikhiqizo. Kepha ngemuva, bebelokhu benza amagagasi ethulile emhlabeni wokuhamba ngebhayisikili entabeni, benza amanye amathayi ahamba phambili impela, besebenzisa i-wonder drug graphene, nokuba nenqubo yokukhiqiza eyindida ngempela, njengoba kungenzeka uqaphele. ehleli phambi kwefemu yaseLion Tires.
Manje iLion Tires Thailand yinkampani yokukhiqiza ephethwe yiVittoria. Manje lokhu kwaqalwa ngo-1988 ngenkathi iVittoria Tyres yenza ukuhlelwa kabusha okuncane futhi yanquma ukuthi lena kwakuyindawo engcono kakhulu yokuba nale ndawo. Izizathu ezisobala zalokhu, iraba liwumkhiqizo wemvelo ovela eThailand futhi bayizingcweti kuwo.
ILion Tires Thailand iqashe abantu abayi-1300 kanti bangama-100% eThai. Futhi kufanele ngithi indlela abaqhuba ngayo le ndawo ukucabanga kwengqondo. Ngo-2013, uVittoria wavula indawo eyizigidi ezingama- $ 11 ngomshini ohluke ngokuphelele obavumela ukuthi benze i-4C compound, into ekhethekile ekwakhiweni kweminye imikhiqizo yakwaVittoria, kepha ubuchwepheshe be-4C nobuchwepheshe beGraphene buphelele ngokuphelele kumathayi akwaVittoria.
Lesi manje yisampula lesondo ebeligibele uTom Wilson, umgibeli we-enduro waseBrithani. Isetshenziswe kumaround amabili we-EWS, kufaka phakathi i-Finale Ligure. Lokho manje yisivivinyo sekhwalithi yaleli thayi.
Ngenxa yokuthi isenezinduna zayo kusenokuphila okuningi kuyo uma ungayinaki iqiniso lokuthi lisikiwe ukuze ngibone leli phethini. Leli thayi liyisondo elingu-4C. Iqukethe izinhlanganisela ezine.
Ine-graphene esitendeni futhi inezinto ezifakwayo eziseceleni. Lobu ubuchwepheshe bamuva. Kepha ake sithole okwengeziwe ngakho, akunjalo? I-Graphene ikakhulukazi.
Yini i-graphene? futhi kungani kusethini yamathayi nje? Okokuqala, i-graphene yenziwa nge-graphite. Yebo, ungqimba olulodwa lwe-athomu lwe-graphite futhi lwakhiwe ngama-athomu wekhabhoni ahlanganiswe ngokuqinile, i-lattice yangaphambili enezinhlangothi. Ngoba i-graphene ungqimba olulodwa lwama-athomu, ingasetshenziselwa ukugcwalisa izimbobo zamangqamuzana.
Yilapho ukusetshenziswa kwamathayi kusebenza khona. Sizofika kulokho ngomzuzwana. I-Graphene yinto ebonakalayo eyaziwa kakhulu futhi umucu owodwa uphindwe kasigidi kunonwele lomuntu.
Ukuzaca izikhathi eziphindwe kasigidi. Uma lokho kunganele, igremu ye-graphene ingamboza amamitha-skwele angama-2600 wokukhangisa okuzungezile. IGraphene nayo iyizinto eziqine kunazo zonke ezaziwayo futhi isebenza ngamandla acishe aphindwe ka-200 kunensimbi.
Ngaphezu kwalokho, iphinde ibe yinto eqhuba kahle kakhulu ngakho-ke inikeza amathuba amahle okusetshenziswa kwezinye izindawo. Futhi ilula ngokuphindwe kasithupha kunensimbi nayo. Le nto ngempela ileveli elandelayo.
Nazi izibalo ezimbalwa mayelana namagrafu nendlela esetshenziswa ngayo kumathayi. Ingangeza ukumelana nokubhoboza okungu-4% lapho isetshenziswa kwizidumbu. Futhi ngokuthakazelisayo, amandla akho angaphezu kwama-5% aya ekunyakazeni phambili.
Esinye sezici ezibaluleke kakhulu ekufakeni i-graphene kumathayi ukuthi avumela ukubambelela okwenziwe ngcono lapho kumanzi. Lokhu ngempela kuyinto ekhethekile kubhayisikili bezintaba. Kodwa-ke, uVittoria angathanda ukusho ukuthi ukufaka i-graphene eningi kakhulu kumathayi kungaqinisa isondo ngokweqile, okungasizi ngalutho nokuphambene ngqo.
Manje uVittoria usebenzise isayensi yangempela lapha, esebenzisa ososayensi bangempela kumajakhethi amhlophe. Batshale imali eningi ekuthuthukiseni lobu buchwepheshe, uzobona ukuthi bufakwa kukho konke abakwenzayo ngokuzayo. Ngakho-ke i-4C, kusho ukuthini ngempela lokho? Kusho ukuthi isondo linezinhlanganisela ezine.
Manje ngokwesiko unethaya elihlanganisiwe elilodwa futhi ungaba nezinhlanganisela ezithambile nezinhlanganisela ezinzima. Lezi zinhlanganisela ezinzima manje zihamba ngokushesha, kepha azisebenzi kangako ngenxa yalokho. Izingxube ezithambile, okuphambene nalokho.
Kepha noma kukhona ukuxubana okuthambile, izinduna ziyajikeleza, okusho ukuthi, A) Akunjalo? Kuzohlala njalo lapho ugibela, futhi futhi, zingaphuka futhi nezinduna zingadabula ezimeni ezithile. Kepha ngamakhompiyutha amane lokhu kusho ukuthi isondo likwazi ukubamba kakhulu. Ngakho-ke ungawanakekela lawo mahlombe futhi uwenze abe mahle futhi athambe.
Irabha ngaphezulu ikunikeza ukudonsa. Banesisekelo esiqinile ngaphansi ukuze bakubambe ukuze akwazi ukusika futhi enze umsebenzi wakhe wenziwe. Isimiso esifanayo siyasebenza kuphrofayili eshiwo phakathi kokuthi isondo ligingqika ngokushesha kangakanani nokuthi ungathola ukudonsa okungakanani kusondo.
Futhi lokho kusebenza futhi kubhuleki. Ngakho-ke ngalezi zingxube ezine uthola okungcono kakhulu kuwo wonke umhlaba. Lokho empeleni kusho ukuthi isondo nalo lihlala isikhathi eside.
Ikakhulukazi uma ubheka ukuthi ithayi lithambe kangakanani phezulu nokuthi ungaphuma kalula kangakanani kulo. Manje ngizoninika nje isibonakaliso esincane lapha. Ngakho-ke lokhu kungumhloli we-Shore A tire durometer futhi kukukhombisa ngokomzimba umehluko wenhlanganisela.
Ngakho-ke, uzobona uma ngikulinganisa lokho, ubheka cishe okungama-50 okungajwayelekile lapha. Futhi uma uya phezulu phezulu kwengxube yamathayi esinyathelweni uku-42, okuyindlela, ethambile kakhulu kukho konke ukudonsa okubalulekile. (Umculo othambile) - Isigaba sokuqala sendlela okwenziwa ngayo isondo, empeleni siyirabha uqobo lwayo.
Manje injoloba yemvelo iza ifomu le-latex kusuka ezihlahleni ezinjengalesi futhi iThailand idume ngayo. Uyabona lapha lapho bafike benza isibazi esihlahleni futhi bakwenze khona lokhu ngamabhanoyi lapha kulezi zimbiza zokuqoqa. Vele, injoloba evela esihlahleni ingokwemvelo ngokuphelele.
Kepha ukuze irabha uqobo lwayo luzinze ngokuphelele ethangeni futhi lisebenze ngokusemandleni alo, kufanele lihlanganiswe nenjoloba yokwenziwa futhi yinto eyenzeka emnyangweni wokuthuthukiswa kwenkomponi efemini yabo. (Umculo Ojabulisayo) - Kunezinyathelo ezingamakhulukhulu ngokoqobo zokuklama, ukuthuthukisa, ukuhlola nokwenza amathayi manje, futhi lesi sikhala senzelwe ukuhlola izici ezithile. Manje lo mshini uyesabeka, upholile kakhulu, futhi empeleni uyigeji enkulu yamasondo obuchwepheshe obusezingeni eliphezulu.
Ngakho-ke lokhu kukala zonke izici ezisesondweni ukuqinisekisa ukuthi ziqonde ngokuphelele. Uma amathayi evivinywa ezintweni ezahlukahlukene, engizokukhombisa zona, uyazi ukuthi isondo lelo alihlangene ngalutho nalo. Kwenza ngempumelelo i-equation.
Manje ngicabanga ukuthi ngiqinisile uma ngivele ngishaye inkinobho yokugijima lapha futhi uzokwazi ukubona leyo kickstart. Manje kuhlole, konke kuyisici esifanayo abengalindela ukubona i-jigand yesondo lobuchwepheshe langempela. Nginesiqiniseko sokuthi uma uCalvin ekubona lokhu uzokuthanda ngokuphelele.
Ngizokwenza lokhu ngemuva lapha futhi sizobheka into eyodwa enhle kakhulu. Ngiqonde ukuthi, njengoba ubona, kukhona ukuhlolwa kwengcindezi yokuqhuma, ukuhlolwa kokuvuza komoya lapha, okunye ukuhlolwa kokuvuza komoya, futhi lokhu kuyintandokazi ethile. Manje ukumelana kokubhoboza kwecala kuhlolwe okuphezulu lapha. 8 mm.
Ngakho-ke lokhu kuyinto ejwayelekile kakhulu emhlabeni wezithuthuthu. Emhlabeni webhayisikili wasentabeni, sinezinto eziningi ezincanyana esingazibhoboza. Ngakho-ke unokucwengisisiwe lapha.
Banokuthile lapha ukulingisa uhlobo lomphumela ongawuthola ku-slashor yomgwaqo. Futhi ukucinana. Futhi kulapho kuphola khona.
Sivele sicindezele leyo nkinobho. Ungayibona ingena esondweni futhi iphuzu lonke ukuthi ukungaguquguquki kwesidumbu sesondo kuqinisekisa ukuthi ikwazi ukumelana nanoma yini edingeka ukuba ibe sendaweni engaphandle komgwaqo. Manje lapha unokuthile okuthiwa i-ozone tester.
Kuyamangalisa ngokuphelele. Le yindlela ophatha ngayo i-O3 ngempumelelo, eyaziwa njenge-ozone, ngqo kumasondo. Futhi umsebenzi ukulingisa uhlobo lokucindezelwa isondo eliyoba nalo ngesikhathi senkonzo yalo yempilo.
Wake waqaphela ukuthi amathayi amadala ngempela abukeka esegugile? Izinyembezi zenjoloba futhi ziyavela ngokoqobo. Yilokhu lo mshini wenzelwe ukuguga amathayi. Ngale ndlela, ungabheka ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani ukuthi isondo liphule ngempela.
Kepha ngeke ukubone lokho ngaphandle kokuthi konke kuvaliwe. Ngakho-ke ake sifike komunye umshini opholile ezansi lapha. Manje lokhu kungukuhlolwa kokuphikiswa, leli sondo elithile empeleni linethayi lomgwaqo, asinendaba kakhulu manje, futhi unokuthile okuphansi lapha okuhle kakhulu.
Ngakho-ke lokhu kuthatha ngempumelelo isampula eyinhloko yesondo. Ngakho-ke lapha, ecaleni uqobo, ungabona 2.8 mil, 2.6 mil, 2.2 mil, 2 mil.
Empeleni yenziwe ngezingxenye ezizenzakalelayo zethaya. Ngakho-ke ungabona ukuvumelana nesimo. Manje amathayi athathwa ngokungahleliwe eqenjini ngalinye.
Futhi uma nganoma yisiphi isikhathi ngenkathi kwenziwa kunenkinga lalela ikhasi bazoqhubeka nokuhlolwa okuqhubekayo. Ngoba iphuzu lalesi sikhungo ukuba nekhwalithi engcono kakhulu nokuqinisekisa ukuvumelana okuphelele. Akunandaba ukuthi uthenga liphi isondo, liyikhwalithi efanayo nale elandelayo.
Yeka ukusetha okupholile. Thanda lolo hlobo lwezinto. Ngakho-ke lokhu empeleni kuyirabha yemvelo.
Inqubo yakho konke iqala khona lapha. - Irabha ixubene nezithasiselo eziningana nenjoloba yokwenziwa eqinisa ingxube. Ngaphezu kokuba yimpuphu yokwengeza ama-graphene flakes afakwa futhi alinganiswa ngokucophelela lapha, ngokuqinile ngokuthola iresiphi eyimfihlo kaVittoria.
Ngakho-ke lapho ukwakheka kwempuphu sekuvuliwe, bazohlangana namafutha avela kulezi zinhlelo (ezingaqondakali) lapha - i-funnel enkulu ekugcineni kwalapha. Futhi-ke lokho kuya ngqo engxenyeni elandelayo yenqubo, okuyi-mixer enkulu ukuyilungisa, ukuyiguqula ibe injoloba. Ngakho-ke lena injoloba egcina iphuma emshinini, manje isihlanganisiwe.
Futhi ungaqaphela ukuthi empeleni kukhona umusi ophumayo. Cishe ngama-degree angama-150 njengamanje, futhi lokho kungenxa nje yokungqubuzana kule nqubo yokuxuba. Ngemuva kwalokho iqhutshwa ngokushesha ibhande lenqubo ye-homogenization.
Yilapho-ke lapho amagwebu omoya akhishwa khona ngaphandle kwerabha. Futhi-ke kulungiselelwa ukwelashwa. Iphathwa ngakho-ke empeleni ayinamathele kuyo.
Futhi-ke ifinyelela emahoreni ayisishiyagalombili agcinwayo nenqubo yokupholisa esiqandisini, iyashiswa ukuvuthisa le njoloba. Futhi-ke, uma isithanjisiwe, sekuyisikhathi sokubeka izinto ngomshini we-4C opholile ngempela. Ngakho-ke uma sekwenziwe inqwaba yenjoloba, bathatha amasampuli aleyo nqwaba futhi idlule kuzo zonke lezi zinqubo, ngakho-ke ngokuyisisekelo uthola ipuck enjoloba bese lezi zinkukhu zenjoloba zifakwa ezivivinyweni ezahlukahlukene, manje ezinye zalezi zivivinyo ze-ozone futhi kukhona eyodwa epholile ngempela lapha Kubaluleke kakhulu impela ngebhayisikili elisezintabeni futhi kumayelana nokubuyiswa kwenjoloba.
Manje njengoba sesazi ukuthi sifuna injoloba ebuyayo ehamba kancane ezinhlotsheni ezithile zamathayi, njengamathayi okwehla. Manje ufuna inombolo ephansi lapha. Njengoba ukwazi ukubona, umhloli we-Rebond resilience.
Ngakho-ke uma ngishaya leyo nkinobho lapha, ungabona lelo piki elincane lenjoloba laphaya ezansi. Futhi ilinganisa ijubane lapho idivayisi ibuya khona. Ingxenye encane epholile yetikiti.
Manje, ngaphezu kokuphindaphinda, udinga ukuhlola namandla okuqina. esikala ngokuyisisekelo lapho irabha ingagqashuka khona. Ngakho-ke thatha isampula lapha njengoba ubona ngemuva.
Uwalayisha kulo mshini. Kuyimitha yokungezwani. Ungabona kahle ukuthi ukuprakthiza kuhamba kanjani.
Ulinganisa iphuzu lapho iphuka khona ngempela. Ngakho-ke ungahlola injoloba ngamandla nokuvumelana. Manje lapho injoloba isilungile, ingena lapha, ulayini we-4C ukwenza konke kwenziwe.
Manje lo yiwona kuphela umugqa emhlabeni onjalo. Futhi kubiza uku-oda kwe- $ 11 million ukwakha, futhi empeleni bekufanele kuhlale ifektri ezungezile. Lona ukuphela komshini wohlobo lwawo emhlabeni futhi yiwona kuphela ongakhama izinhlanganisela ezine kusondo elilodwa, njengoba ubona lapha, usulungiselele amaqoqo enjoloba ukungena emshinini.
Manje umshini ungabamba kuze kube ngamaqoqo amane ezinhlanganisela zenjoloba ezahlukahlukene. Yiphuzu lonke lelo. Njengoba ubona lapha banezinhlelo zokudla.
Unezine zazo. Futhi ezansi ngayinye yazo inenhlanganisela yenjoloba ehlukile. Kuya ngesondo elenziwe ukuthi iyiphi ifomula esetshenziswayo.
Futhi kubhaliwe. Ihamba ngomtshina wensimbi ngoba kufanele iqinisekise ukuthi azikho izinhlayiya zensimbi ezizolimaza umshini. Ngemuva kwalokho ingena emigodini emikhulu, lapho ngifaka khona konke kudayisi.
Manje okufayo kwenziwa ngensimbi futhi kudinga ukufudunyezwa kufinyelele kuma-degree angu-100 ngaphambi kokuthi kusetshenziswe. Manje lokhu kungenye yesondo likaMartelo lapha. Zifudunyezwa kuhhavini, khona lapha nami, futhi yileyondlela irabha ekhishwa ngayo lapha, kule ngxube ye-4C.
Manje njengoba ingxube seyikhishiwe, ilandela uchungechunge lwamabhande wokuhambisa lapho ihlinzekwa ngesipholisi. Bese kuthi ekugcineni kube nokulimala ngaphansi. Manje le njoloba, ezoba yinyathela yamathayi, bese yakhiwa ngesidumbu sonke sesondo, kubandakanya ubuhlalu, izitika kanye naso sonke isidumbu esibalulekile.
Lapho uhlanganisa isidumbu senayiloni, ukusenza sibe nzima ngokwanele futhi usivumele ukuthi sibambe kahle uselim, kufanele sihlanganiswe nenjoloba. Manje lapha usuyabona ukuthi le rabha ensundu yenziwe kanjani i-homogenized ukuyenza bushelelezi nokuyishisisa ukuze ikwazi ukubambeka ngokwanele ukuba ifakwe kulo mgodla wenayiloni. Injoloba ihlanganisa inayiloni ndawonye uchungechunge lwama-roller ukwenza izinto zihambisane kahle ne-nother, uma isibopho sesiphelile ziyasongwa bese ziboshelwa kulo lonke isondo engxenyeni elandelayo yenqubo yokwakha.
Manje lokhu kuyamangaza ngokuphelele ukuzibona mathupha. Abasebenzi banamakhono amakhulu futhi ngishaqeke ngokuphelele ukuthi bashesha kanjani ukwakha isondo ngazo zonke lezi zingxenye. Futhi bangakwenza kanjani lokho.
Isisebenzi ngasinye sinomshini we-bespoke owakhelwe lo msebenzi ngokukhethekile futhi kuyasangana ukubona umshini njengoba ulinganiswe ngokuphelele ngesandla. Ineziqondiso ze-laser ngokunemba okuphelele lapho usika izingxenye. Okokuqala isidumbu siyasongwa, lapho bese sakha isisekelo salo lonke ithayi.
ongakudla ngemuva kokuhamba ngebhayisikili okude
Ubuhlalu buye buhlanganiswe ngamathathu okuhlangothini ngalunye. Isigubhu sibe sesigoqa isidumbu phezu kobuhlalu, ohlangothini ngalunye, nakho okwandisa amandla esidumbu. Bese kuthi-ke kukhona ukuqiniswa.
Okulandelayo kuza i-flap. Lokhu empeleni kuyisembozo sobuhlalu futhi kusiza kakhulu ukwenza ukuthi isondo lingenashubhu elihambisanayo - yingxenye ebaluleke kakhulu yethayi. Futhi manje ekugcineni iphrofayili efakiwe ye-4C isetshenziswa enkabeni yesondo.
Futhi qaphela ukuthi lokhu kusikwa kanjani futhi ngesandla. Lokhu kunembile, angikholwa ngempela ukuthi kwenziwe ngesandla. Kuyamangaza ukubona.
Kungabukeka kucabalele manje, kepha lokho kuzoshintsha esinyathelweni esilandelayo. Into encane yokugcina lapha ungqimba oluncane lukapende olunikeza ukuthinta kokugcina kwisitikha selogo yeVittoria efanelekile nokulebula kwhlangothi lwethayi. Futhi-ke uselungele isigaba sokugcina senqubo.
Lesi isiqeshana sokugcina sephazili. Isondo lizongena nenjoloba ekhishiwe oyibone iphuma emshinini phambilini. Uya emshinini we-vulcanization, lapho ungaphansi kwengcindezi enkulu nokushisa.
ukukhahlela kwe-abs flutter
Noma yimuphi umzuzu lapho uzobona lokhu kuvuleka bese kuphuma isondo elisha sha, elilodwa lalawo. Lokho kufana nento ebanda kunazo zonke. Ake siyobheka lokhu.
Yangena kanjalo, yebo, isondo elisha sha. Ngakho-ke, asihambe. Ngakho-ke iVittoria empeleni ngamathayi, amathayi ahlukile kakhulu.
Futhi ngamagrafu kanye nezingxube ezine. Ihluke ngokuphelele. Uma unanoma yimiphi imibuzo mayelana nokwenziwa kwamathayi noma ungathanda ukwazi noma yini enye mayelana nobuchwepheshe bamathayi, ngizokwenza isicelo esithile, landela le ndatshana.
Ngakho-ke sihlanganyele kumazwana angezansi. Futhi uma uthanda lokhu futhi unentshisekelo yangempela yokuthi amathayi enziwa kanjani, sinikeze isithupha esikhulu futhi ungakhohlwa ukuqhafaza Bhalisa bese wabelana.
Amaphi amathayi eVittoria enziwa?
Ukunqoba Amathayiyasungulwa ekuqaleni e-Italy e-1953, futhi cishe iminyaka engama-40, inkampanikwenziwakonkeamathayiLapho. Ngo-1990, kodwa, inkampani yayisenkingeni enkulu yezezimali, futhi kulapho abanikazi bamanje bathatha lo mkhiqizo bathuthela umkhiqizo eThailand.03.04.2019
Kuyini iVittoria TLR?
I-TLRKushoIVictoria'sisisindo esilula kakhulu esingenasibhebhe esakhiwe kahle, esihlinzeka ngokugibela okulula kanye nenzuzo enkulu yesisindo uma sekugcinelwe izinzuzo zabasizi abanenhlanhla yokuthola amashubhu. Cabanga nge-I-TLRizinketho zokuba amathayi osuku lomjaho ophakeme kakhulu enziwe atholakale kubantu.
Ayini amathayi e-TNT?
TNTama-alloys aloli anzima, i-divison yamaVelox Wheels, enza amasondo amangelengele, aqinile angancoma amaloli amasha namadala kanye namaSUV.
Ingabe iVittoria Zaffiro Pro Tubeless?
I-ISapphire Proakuyonaengenasifoimodeli ye-clincher kuphela futhi itholakala kububanzi be-25, 28, 30 no-32mm. Ukufakwa kwe-32mm esivivinyweni kwakulula kakhulu, kungadingeki izigaxa zamathayi; Ifuthwe yafika ku-50psi, isondo lalinganisa u-34mm uma lifakwa erimini elinobubanzi obungu-21mm ngaphakathi.
Ingabe amathayi aseVictoria awanaso ishubhu?
Ngesisindo esincane,engenasifo-sekuvele, ukuvula ikhebula le-tubular, i-UkunqobaICorsa Speed ​​G PlusITire elingenamanziikhokhiswa njengeyona esheshayo emhlabeniisondo elingenathumbufuthi ifaka inguquko ye-graphene technology yenhlanganisela engakaze ibonwe yokumelana okuphansi, ukuqina, nokubamba konke kwesimo sezulu.
Kungani singaasebenzisi amathayi angenamoya?
Ngoba iisondo elingenamoyainokumelana okukhulu kokugoqa futhi ihlakaza ukushisa okwakhiwe laphobonaziyasebenza. Ngaphandle kwalokho, Kubeka isithiyo ekushayeleni okubushelelezi futhi kwandisa isisindo samasondo. Kungakho abakhiqizi bezimoto bengakaze bakhethe ukwenza imoto efakweamathayi angenamoya.
Ngabe amathayi angenamoya angumbono omuhle?
Umoya kuamathayiimvamisa ingamunca umthelela wembobo noma iqhubu ngenxa yamandla amakhulu okumiswa. Vuliweamathayi angenamoya, ukumiswa kuzoba phansi, okuholele ekugibeleni ngamandla. Impela, eyakhoamathayingeke kudingeke ukuthi ihlolwe, kodwa imoto yakho ngokuqinisekile izokwenza kanjalo. Lokhu kungadala ingozi enkulu emotweni yakho kune-kuhle!25. 2015.
Yini i-clincher TIRE?
Clincher amathayizitholakala kuningi lamabhayisikili emigwaqo. Leziamathayibabe nephrofayili emise okwesihlangu sehhashi, okuthi 'clinchers'usebe lapho iyabougcwele umoya. Ubuhlalu be-yaboibanjelwe kuphrofayili exhunywe erimu yamasondo, ngokucindezela komoya ngaphakathi kwe-yabo.
Ngabe iVittoria Zaffiro Pro Tubeless ilungile?
UVittoria Rubino ProIGraphene 2.0Tubeless ReadyIClincher Road Tire.Tubeless ngomumoikuvumela ukuthi ugijime kushubhu nomaengenasifoi-tire sealant uma isondo lakhoezingenathumbu sezilungilenge-set up. Idizayinelwe ukuqeqeshwa okunamandla, ilingana ngokulinganayo nemicimbi yomjaho.
Ziyini izinzuzo zethayi lakwaVittoria?
Eminyakeni embalwa eyedlule, uVittoria wethula i-graphene ezweni lamathaya, ethembisa izinzuzo eziningi ekuqhubekeni kokumelana, ukubamba nokugqoka. Le nguqulo engu-2.0 isesibindi ezimangalisweni zayo. Amathayi amasha ahlose ukuhlinzeka ngama-'40% anciphise ukumelana nokugingqika, ama-30% abambelele futhi ama-40% athuthukise ukuqina '. Izibalo lezo futhi kunokunye okuningi.
Ingabe iVittoria Barzo isondo elihle lebhayisikili lezintaba?
IVittoria Barzo iyisondo lamabhayisikili ezintaba ezinqamula izwe elinephethini elinolaka lokunyathela. IBarzo ibukeka ilingana kahle njengesondo langaphambili nelishesha esondweni langemuva. IBarzo ngemuva, uma udinga ukubanjwa, nayo kufanele ilunge. Isikhangiso Thenga iVittoria Barzo TNT G + 2.0 ku-Amazon.com
Yiliphi isondo elihamba phambili leVittoria Corsa?
Isondo elibuyekeziwe leVittoria Corsa G2.0 lingukuziphendukela kwemvelo okungaphezu kwenguquko. Izinguquko ezincane zakha isondo elicwengiwe ngokuzizwa okusheshayo, okulula, ukubamba okuningi ekhoneni kanye nezinga lokugqoka elithuthukisiwe ngokuphawulekayo. Izindonga eziseceleni kwe-tan zisazongcolisa, noma ungazigcina zihlanzekile.
Spin izicathulo - ukuthola izixazululo
Yiziphi izicathulo ezihamba phambili zokuphotha? Nazi izicathulo ezihamba phambili: Izicathulo ezihamba phambili ze-BOA spin jikelele: I-Giro Cadet (Abesilisa nabesifazane) Izicathulo ezihamba phambili ze-velcro jikelele: I-Pearl Izumi Quest Studio (Eyabesilisa neYabesifazane) Izicathulo ezihamba phambili ze-BOA kusabelomali: I-Specialised Torch 1.0. kusabelomali: Shimano RP1.10 мар. 2021 г.
kufanele ngivivinye umzimba ngaphambi kokulala
Ngabe kufanele ngivivinye umzimba ngaphambi kokulala - imibuzo nezimpendulo ezibhalwe ohlwini
Ingabe ukuzivocavoca ngaphambi kokulala kuhle? Ukuzivocavoca ngaphambi kokulala ngokuvamile kuye kwadikibala. Kwakucatshangwa ukuthi ukuzivocavoca ngokuhamba kosuku kungenza kube nzima ukulala nokulala kahle ebusuku. Kodwa-ke, ucwaningo lwakamuva luthole ukuthi ukuvivinya umzimba ngokulingene ngeke kuthinte ukulala kwakho uma ukugcwalisa okungenani ihora elilodwa ngaphambi kokulala. 2020 г.
ukuqeqeshwa kwesifunda kwabagibeli bamabhayisikili
Ukuqeqeshwa kwesekethe kwabagibeli bamabhayisikili - Imanuwali Ephelele
Ngabe ukuqeqeshwa kwesekethe kukulungele ukuhamba ngebhayisikili? Ukufaka ukuqeqeshwa kwesifunda enkambisweni yakho yokuziqeqesha kungaba yindlela enhle yokuthuthukisa isivinini ebhayisikili futhi ugcine izinto zithakazelisa.
Ngabe ungaphuma kwi-CrossFit? Yebo, ekugcineni ungaba ne-abs futhi ube muhle eCrossFit. 18 февр. 2018 г.
ngizizwe ngikhathele ngesikhathi sokuzivocavoca
Ukuzizwa ukhathele ngesikhathi sokuzivocavoca - ukuthi ungabhekana kanjani
Ngibhekana kanjani nokukhathala ngesikhathi sokuvivinya umzimba? Ukukhathala kwangemva kokuzivocavoca kungaba umkhiqizo wezinto eziningana, kodwa izindaba ezinhle ukuthi ukulwa nokukhathala ngemuva kokuzivocavoca kungaba lula. Buyekeza uhlelo lwakho lokuzivocavoca. Phuza amanzi ngaphambi kokuzivocavoca. Yidla ngemuva nje kokuzivocavoca. 22.02.2018
izivivinyo ze-kettlebell ze-abs
Ukuzivocavoca kukaKettlebell kwe-abs - izimpendulo ezindabeni
Ingabe ama-kettlebells alungele i-abs? Ama-kettlebells, nokho, angelinye lamathuluzi aqinisa kakhulu we-abs, kusho uLacee, ngoba ajwayele ukubanjwa eduze komzimba, okuphoqa umnyombo wokusebenza kanzima, ikakhulukazi njengoba isisindo siba nzima. 2 ku-2019 г.